Momba anay - Hong Bang Packaging Co., Ltd.
natsangana tamin'ny taona 2000, dia mpanamboatra mahay any Shina manokana amin'ny fanontana loko miloko plastika sy fametahana laminating fonosana malefaka, sarimihetsika vita amin'ny metaly vita amin'ny habakabaka ary horonantsary maro karazana.
Ny vokatray dia manarona ny sakafo, ny akora simika isan'andro, ny fanafody, ny agrochemicals, ny electronics, ny fitaovana fananganana ary ny saha hafa. Ankehitriny dia manana sampana telo izahay, Hong Bang (Hong Kong) Packaging, Hong Bang (HUIZHOU), izay samy mankafy fidirana amin'ny fitaterana mety mankany amin'ny seranan'i Hong Kong sy ShenZhen.
Ny orinasa misy anay dia miorina ao HuiZhou.
Tongasoa eto hitsidika ny atrikasa tsy misy vovoka.
Ny orinasanay dia mahafeno ny fenitry ny mekanisation sy automation. Ny mpiasanay amin'ny alàlan'ny fampiofanana amin'ny famokarana matihanina dia manaraka tsara ny fenitry ny famokarana hiasa. Ankehitriny ny orinasanay dia manana haingam-pamokarana maherin'ny valopolo ao anatin'izany ny mpanonta printy miloko efatra ambin'ny folo, ny laminator hafainganam-pandeha, ny milina fanaovana kitapo ary ny milina fanaovana sary mihetsika marobe.
Sarin'ny orinasa bebe kokoa
Mankato tanteraka ny rafitra fitantanana ISO9001, ISO14001 ary ISO22000 izahay, nahazo patanty BRC, FDA ary 63 ihany koa izahay. Manome vahaolana fonosana, famolavolana ary mamokatra karazana fonosana fanonon-doko miloko isan-karazany izahay. Satria mino izahay fa hiteraka ho avy mamiratra ny fanavaozana, dia manokan-tena izahay hamorona sehatra fikarohana sy fampandrosoana lehibe ary fotodrafitrasa hi-tech hiasa amin'ny fonosana maitso, amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa lalindalina amin'ireo andrimpanjakana fikarohana siantifika maro any Sina sy iraisam-pirenena. orinasa famonosana fanta-daza. Natokana ho an'ny fifehezana kalitao henjana sy serivisy ho an'ny mpanjifa misaina, ny mpiasanay efa za-draharaha dia misy foana hiresaka momba ny zavatra takinao sy hiantohana ny fahafaham-ponao. Na kely na lehibe, na tsotra na sarotra ny kaontinao dia aza misalasala mifandray aminay. Ny serivisy tsara sy ny kalitao afa-po dia miaraka aminao foana.